ကြံ့ဖွံ့အစိုးရ၏ သင်္ကန်းခြုံ သောနုတ္တိုရ်လက်သစ်များ – တူမောင်ညို | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Buddhism » ကြံ့ဖွံ့အစိုးရ၏ သင်္ကန်းခြုံ သောနုတ္တိုရ်လက်သစ်များ – တူမောင်ညို
ကြံ့ဖွံ့အစိုးရ၏ သင်္ကန်းခြုံ သောနုတ္တိုရ်လက်သစ်များ – တူမောင်ညို
Posted by kai on Feb 19, 2014 in Buddhism, Opinions & Discussion | 16 comments
တူမောင်ညို (၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၇ ရက် )
မတရားမှုနဲ့ ခြိမ်းခြောက်အနိုင်ကျင့်မှုမှန်သမျှကို သမ္မတပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ပဲဖြစ် ဖြစ်၊ ကာချုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ခေါင်းပေါင်း ပေါင်းထားတဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက ကျူးလွန်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ယူနီဖောင်းဝတ်ထားတဲ့ စစ်ဗိုလ်စစ် သား၊ ရဲဗိုလ်ရဲသားက ကျူးလွန်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သင်္ကန်းခြုံထားတဲ့သူက ကျူးလွန်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ပြတ်ပြတ်သားသား ဆန့်ကျင်ကြရပါလိမ့် မယ်။
စွမ်းအားရှင်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက ရိုင်းစိုင်းရမ်းကားပြီးတဲ့နောက် သင်္ကန်းဝတ်စွမ်းအားရှင်တွေရဲ့ ခြိမ်းခြောက်ရမ်းကားမှုတွေ အစီအရီပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။ ဗိုလ်သိန်းစိန်ကြံ့ဖွံ့အစိုးရနဲ့ ဗိုလ်ရွှေမန်းလွှတ်တော်က ဒီဖြစ်ရပ်တွေကို အရေးယူဆောင်ရွက်မှုမပြုတဲ့ အပြင် ရိုင်းစိုင်းရမ်းကားသူတွေဘက်ကနေ အကာကွယ်ပေးနေပါတယ်။ သဘောရိုးနဲ့ပြောတာပါတဲ့။ ဒီလိုပြောတာဟာ ရိုင်းစိုင်းရမ်းကား မှုတွေကို အားပေးထောက်ခံတာပါပဲ။
မြောက်ဥက္ကလာမှာ သင်္ကန်းဝတ်စွမ်းအားရှင်တစ်စုက မောင်ကိုနီနဲ့ ကိုမြအေးတို့ကို ခြိမ်းခြောက်အနိုင်ကျင့်ပြီး ပြည်ထောင်စုနေ့ စာပေဟောပြောပွဲမဟောပြောရဘူးဆိုပြီး ဟောပြောပွဲကို ဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့တယ်။
အကြောင်းပြချက်က “ ပြည်ထောင်စုဖွား တိုင်းရင်းသားမဟုတ်တဲ့ မူဆလင်နှစ်ဦးဖြစ်လို့”တဲ့။
ယခုတခါ မန္တလေးက စာပေဟောပြောပွဲတစ်ခုကို သင်္ကန်းဝတ် စွမ်းအားရှင်တစ်စု လာရောက်ပြီး ကိုမြအေး အား “အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်” ဖြစ်လို့ဆိုတဲ့ မတရားတဲ့၊ အဓိပ္ပါယ်မရှိတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ ဟောပြောသူတွေထဲကနေ ဖယ်ရှားပေးရမယ်လို့ ခြိမ်းခြောက် အနိုင်ကျင့်ခဲ့ပြန်တယ်။
ဒီလို ခြိမ်းခြောက်အနိုင်ကျင့်တာကို ဟောပြောပွဲစီစဉ်သူတွေက အဖက်ဖက်တွက်ချက်ပြီး ကြောက်ရွံ့ခြင်းကို အဓိကအခြေခံ ထားတဲ့ အမြော်အမြင်နဲ့ မောင်ကိုနီနဲ့ ကိုမြအေး ကို ဖယ်ရှားပြီး လူစားထိုးပေးခဲ့ရတယ်။
ခြိမ်းခြောက်အနိုင်ကျင့်တာကို ငြိမ်ပြီး ငုံ့ခံနေရင်၊ လက်ပိုက်ကြည့်နေကြမယ်ဆိုရင် ခြိမ်းခြောက်အနိုင်ကျင့်သူတွေ ဆက် လက်ပြီး မိုက်ရိုင်းရမ်းကားနေမှာပဲ။ ဒါကြောင့် ခြိမ်းခြောက်အနိုင်ကျင့်မှု သဘောထား၊အပြုအမူနဲ့လုပ်ရပ်မှန်သမျှကို ပြတ်ပြတ်သားသား ဝိုင်းဝန်းဆန့်ကျင်ကြရပါမယ်။
ဒီလို ဆိုးသွမ်းရမ်းကားတဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို သမာသမတ်ကျတဲ့ ဘာသာရေးပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊ ဘာသာရေးအသင်းအဖွဲ့တွေ၊ သက် ဆိုင်ရာ နိုင်ငံရေးပါတီတွေ၊လူမှုအခြေပြုလူထုအဖွဲ့ အစည်းတွေ၊ စာပေအနုပညာအသင်းအဖွဲ့တွေ အားလုံးက တညီတညွတ်ထဲ ကန့် ကွက်ဆန့်ကျင်ဖို့လိုပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဒီမိုကရေစီအလံကိုင်ပါတီကြီးဖြစ်တဲ့ ဒီချုပ်ပါတီက ဒီကိစ္စအပေါ် အလေးအနက် ဆန့်ကျင် ကန့်ကွက်ဖို့လိုပါတယ်။ “၈၈ ငြိမ်းပွင့်” နဲ့ စာပေစာနယ်ဇင်းဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေကလည်း အလေးအနက်ဆန့်ကျင် ကန့်ကွက်ကြဖို့ လိုအပ်ပါ တယ်။
ဒီလို မိုက်မဲဆိုးသွမ်းတဲ့ လုပ်ရပ်က အောက်ပါကိစ္စရပ် ၂ ခုကို တပြိုင်နက်ထဲ ကျူးလွန်ဖောက်ဖျက်စော်ကားတာဖြစ်ပါတယ်။
“၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေ” အရပြောမယ်ဆိုရင် ပုဒ်မ ၃၄၊ ပုဒ်မ ၃၄၇၊ ပုဒ်မ ၃၄၈၊ ပုဒ်မ ၃၅၃၊ ပုဒ်မ ၃၅၄၊ ပုဒ်မ ၃၆၂ ၊ ပုဒ်မ ၃၆၄တို့ကို အတိအလင်း ချိုးဖောက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ ၂၉၅ (က) ကိုလည်း ချိုးဖောက်ကျူးလွန်နေ တာဖြစ်ပါတယ်။
ကြံ့ဖွံ့ပါတီ၊ ကြံ့ဖွံ့အစိုးရက စွမ်းအားရှင်တွေ ကို သင်္ကန်းစီးပေးပြီး လက်ကိုင်ဒုတ်လုပ်အသုံးချနေပါတယ်။
“သင်္ကန်း” မြင်ပြီး၊ ငြိမ်ခံနေကြမယ်၊ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအတွက်ဆိုပြီး စိတ်ရှည်သည်းခံနေကြမယ်၊ ရေငုံနှုတ် ပိတ်နေကြမယ်၊ လက်ပိုက်ကြည့်နေကြမယ်၊နှာစေးနေကြမယ်ဆိုရင်ဖြင့် “သင်္ကန်းခြုံ သောနုတ္တိုရ်လက်သစ်များ” က လက်ခမောင်းခတ်၊ အတင့်ရဲဆိုးသွမ်းနေကြပါလိမ့်မယ်။
“မောင်ကိုနီနဲ့ကိုမြအေး” ကို တားမြစ်ပိတ်ပင်ရာကနေတဆင့် အစ္စလာမ်ဘာသာတားမြစ်ပိတ်ပင်ရေး၊ အဲဒီကနေ “ပုဒ်မ ၅၉ (စ) မပြင်ရေး”၊ နောက်ဆုံး “၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေမပြင်ဆင်ရ ” ၊ “မျိုးစောင့်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပေး”ဆိုတဲ့အဆင့်ထိ တဆင့်ပြီးတဆင့် ရောင့် တက်မလာခင် ပြတ်ပြတ်သားသား ဝိုင်းဝန်း ကန့်ကွက်ဆန့်ကျင်ကြဖို့လိုပါတယ်။
သံဃာ့မဟာနာယကအဖွဲ့ကြီးက နှာစေးသောတေမိဇာတ်တော်ကြီးခင်းမနေဘဲ၊ သောင်းကျန်းချင်တိုင်းသောင်းကျန်းနေသော ဒုဗ္ဗစများကို အရှင်ဘုရားတို့ လက်ပိုက်ကြည့်နေကြပါသလား။ ဒုဗ္ဗစတွေကို ထုတ်ပယ်၊ သန့်ရှင်းဖို့ အချိန်တန်ပါပြီ။
အတိုက်အခံပါတီအမတ်များအနေဖြင့်လည်း မိုက်မဲဆိုးသွမ်းမှုများအပေါ် လွှတ်တော်တွင်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲသင့်ပါတယ်။
မတရားမှုနဲ့ခြိမ်းခြောက်အနိုင်ကျင့်မှုကို လစ်လျူရှုထားမယ်ဆိုရင် အကြမ်းဖက်မှု၊ ရာဇဝတ်မှုတွေကို ကာယကံမြောက်အား ပေးကူညီတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ လစ်လျူရှုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပါတီ၊ အသင်းအပင်းအဖွဲ့အစည်းတွေဟာ အကြမ်းဖက်မှု၊ ရာဇဝတ်မှုတွေကို ကာယကံ မြောက်အားပေး ကူညီနေသူနဲ့ အားပေးကူညီနေတဲ့ ပါတီအဖွဲ့အစည်းအသင်းအပင်းတွေပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ဒီကနေ့ တိုင်းပြည်နဲ့အဝန်းမှာပေါ်ပေါက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ဘာသာရေးလူမျိုးရေးသွေးခွဲ၊ ရန်တိုက်၊ အကြမ်းဖက်နေမှု၊ အုပ်ချုပ်ရေး အာဏာပိုင်အဆင့်ဆင့်၏ အကြမ်းဖက်များ၏ နောက်ကွယ်မှ အဓိကကြိုးကိုင်နေသူတွေထဲမှာ ကြံ့ဖွံ့ပါတီနဲ့ ကြံ့ဖွံ့အစိုးရတို့ နက်နက် ရှိုင်း ရှိုင်း ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အချက်ကိုလည်း လေးလေးနက်နက်သတိပြုမိကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
– See more at: http://moemaka.com/archives/35870#sthash.YXV6baoe.dpuf
မှတ်ချက်။ ။ မိုးမခမှတိုက်ရိုက်ကူးယူဖော်ပြသည်။
၂၀၂၀ ခုနှစ် မြန်မာ နိုင်ငံ
by FNG on February 16, 2014
ခယောင်း ၊ ၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ် မြန်မာ နိုင်ငံ ကာ CNN, ABC, BBC, တိုကျို ရှင်ဘွန်း ၊ အယ်(လ)ဂျာဇီ3း
စွန့် စား ရဲ သော နိုင်ငံ တကာ သတင်း ထောက် တို့သည် မြန်မာ နိုင်ငံ ထဲ သို့ခိုးဝင်
ကြသည်။ ကင်မရာ ကို ပေါ် တင် ကိုင်ပြီး ရိုက်၍ မရ သဖြင့် ခိုးဝှက် ပြီး ရိုက်ရသည်။
ဘယ်လိုပဲ ပဲ ရိုက် ရိုက် မြန်မာ နိုင်ငံ ထဲ မှ ဓာတ်ပုံ ဖြစ်လျှင် နိုင်ငံ တကာ မီဒီယာ တို့က
ဈေး ကောင်း ပေး ၀ယ်သည်။
တစ်ချိန် က တာလီဘန် တို့ အုပ်ချုပ် သော အာဖဂန် နစ္စတန် လို ဖြစ်နေသည့် မြန်မာ ကို
အားလုံး က စိတ်ဝင်စားကြသည်။ အထူး သဖြင့် နိုင်ငံ ရေး ပါတီ လည်း မဟုတ် စစ်တပ်
လည်း မဟုတ် ပဲ အာဏာ သိမ်း ထား သည့် နိုင်ငံ တော် သံဃ ဥသျှောင် ကောင်စီ ကို
စိတ်ဝင်စား ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ အာဏာ သိမ်းပိုက်ထား သည့် နိုင်ငံ တော် သံဃ ဥသျှောင် ကောင်စီ
တွင် ၉၆၉ တပ်မတော် ၊ တောင်သာ တပ်မတော် ၊ မဘသ တပ်မတော် ၊ မူလ မြန်မာစစ်တပ်
ကို နာမည် ပြောင်းထား သည့် ဗုဒ္ဓဘာသာ ကာကွယ်ရေး တပ်မတော် ဆို ပြီး လက်အောက်ခံ
လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့လေးဖွဲ့ဖြင့် ဖွဲ့စည်း ထား သည်။ ထို လက်နက် ကိုင် လေးဖွဲ့ ထဲ တွင် ၉၆၉
တပ်မတော် နှင့် တောင်သာ တပ်မတော် က တန်ခိုး အထွား ဆုံး ဖြစ်သည်။ တစ် ချိန် က စစ်တပ်
ပိုင် သည့် ဦးပိုင် ကုမ္ပဏီ သည် ယခု ၉၆၉ တပ်မတော် ပိုင် ဖြစ် နေ ပြီ။ ဆန်တင်ပို့မှု ကို
တောင်သာ တပ်မတော် က ချုပ် ကိုင်ထား သည်။ အာဏာ ကို ချုပ် ကိုင်ထား သည့် နိုင်ငံ တော်
သံဃ ဥသျှောင် ကောင်စီ ဥက္ကဌ မှ ဦးဝီရသူ ဖြစ်သည်။ ဦးပါမောက္ခ က ရန်ကုန်တိုင်း ၀န်ကြီး
ချုပ် အဖြစ် တာဝန်ယူထား သည်။
နိုင်ငံ တော် သံဃ ဥသျှောင် ကောင်စီ အုပ်ချုပ် သည့် မြန်မာ နိုင်ငံ တွင် အမျိုးသမီးများ မှာ
ဗုဒ္ဓဘာသာ နှင့် သာ လက်ထပ် သည် ဘာသာခြား နှင့် လက်ထပ် ခြင်း မပြုရ ၊ အခြားဘာ
သာ ၀င် နှင့် လက်ထပ် သည် ကို တွေ့ ရှိ ခဲ့ လျှင် ထိမ်းသိမ်း ပြုပြင် ရေး စခန်း သို့ပို့ ပြီး အပြစ်
နိုင်ငံ တော် သံဃ ဥသျှောင် ကောင်စီ အာဏာသိမ်း ချိန် တွင် လွှတ်တော် ကို ဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီး
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ကို ပင် နေအိမ် အကျယ် ချုပ် လုပ် ထား လိုက်သည်။ လွှတ်တော် ဥက္ကဌ သူရ
ဦးရွှေ မန်း ကို မူ တစ်ချိန် က အမေရိကန် ရောက် ခိုက် ၉၆၉ များ ကို နှိပ် ကွပ် မည် ဆိုသည့် အာ
ချောင် ခဲ့ မှု ဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ ကို အကြည် အညိ ပျက် စေမှု ဖြင့် ထောင် သွင်း အကျဉ်းချထား
လိုက်သည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို တော့ နေ အိမ် အကျယ် ချုပ် ချထား ပြီး ၊ ဘင်္ဂလီများ
တစ်အိမ်ထောင် ကလေး တစ်ယောက် နှုန်းသား ယူရမည့် ဥပဒေ ကြမ်း ကို ကန့် ကွက် ခဲ့မှု့
ဖြင့် ဘုန်းတော်ကြီးများ တရားသူကြီး လုပ်သည့် တရားရုံး တွင် အမှု ရင်ဆိုင် နေရသည်။
အမျိုးစောင့် ဥပဒေ ကြမ်း ကို ဦးဆောင် ကန့် ကွက် ခဲ့သူ တစ်ဦး ဖြစ်သည့် ဒေါ်ရွှေဇီးကွက် မှာ
သာသနာ တော် ညှိုးမှိန်စေမှု ဖြင့် အမှု ရင် ဆိုင်နေရသည်။ ခင်ပွန်း ဖြစ်သူ ဦးကျော်သူ ၏ နာရေး
ကူညီ မှု အသင်း ကို မူ ဘုန်းတော်ကြီး များ က သိမ်းဆည်း လိုက်ကြ ပြီး တောင်သာ တပ်မတော်
၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသား များ ၏ ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်း ရုံး ကို လည်း သံဃာ တို့က မီးတင်
ရှို့လိုက် ကြသည်။ ဂျော့ဆိုးရောစ် ကြီးမှ ကူညီထား သည့် ကွန်ပျူတာ များ ၊ လက်တော့ များ ၊ဟန်း
ဖုန်း များ ကို ဘုန်းတော် ကြီးများ က သိမ်းဆည်း လိုက် ကြသည်။ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသား အချို့ 
ကို လည်း သာသနာ တော် ၊ အမျိုးစောင့် ဥပဒေ စသည့် ပုဒ်မ များ တပ် ကာ ထောင်သွင်း အကျဉ်း
ဘုန်းတော်ကြီးများ က ထောင်သွင်း အကျဉ်းချ ထား သည့် နိုင်ငံ ရေး တက်ကြွ လှုပ်ရှား သူများ ကို
ထောင်ဝင်စာ တွေ့ ရ ဉ် စစ်အစိုးရ ခောတ်က ထက် ပို ပြီး ဆန်း ပြား သည်။ ဗုဒ္ဓ ၊ ဓမ္မ ၊ သံဃ ဂုဏ်
တော် ကို အလွတ်ရွတ် ပြ နိုင် မှ သာ လျှင် ထောင်ဝင် စာ တွေ့ခွင့် ရသည်။ အလွတ် မရွတ် ပြ နိုင်
သည့် မိသားစုများ က ပါဆယ် သာ ပို့ခွင့် ရသည်။
၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသား များ အဖွဲ့မှ ပဏ္ဍိတ် ထွန်း ကိုကား ဘုန်းတော်ကြီး ဘွဲ့နှင့် ဆင်ဆင် တူ
သည့် နာမည် ဆိုသည့် ချွင်းချက် ဖြင့် အကျဉ်းထောင် မှ လွှတ်ပေး လိုက်သည်။ သို့သော် လည်း ယခင်
သူ့ ခါး ကြား တွင် အမြဲ ထိုးထား သည့် ဟန်းဖုန်း နှစ်လုံး ကိုကား ပြန်မပေးတော့ ချေ။ ဘုန်းတော်ကြီး
များ အာဏာ သိမ်းပိုက် လိုက်ချိန် တွင် ကိုမြအေး လည်း တော ခိုရသည်။ တောခို ချိန် မရ လိုက်
သူ က ထောင်သွင်း အကျဉ်းချ ခံ ရသည်။
ဒေါ်နော်အုန်းလှ သည် ပင် လျှင် အာဏာသိမ်းစ က အဖမ်းခံရသည်။ နောက်တော့ နိုင်ငံ တော် သံဃ ဥသျှောင် ကောင်စီ
၏ အဓိပတိ ဆရာတော် ဖြစ်သည့် သျှင် ဥာဏိဿရ က အင်္ဂါ ၀တ်ပြု ဆုတောင်း ပြု လုပ် ဖူးသောကြောင့်
ဘုရား တရားကြည်ညို သည် ဟု အထင်ရောက် ကာပြန်လွှတ်ပေး ခဲ့သည်။
နိုင်ငံ တော် သံဃ ဥသျှောင် ကောင်စီ ခောတ် တွင် ည ၈ နာရီ ကျော်လျှင် မိန်း ကလေးများ အပြင် မထွက်
ရတော့ ။ နိုက် က လပ် များ နှင့် ပျော်တော် ဆက် ဧည့် ဂေဟာ များ လည်း ပိတ် ရသည်။ လမ်းထိပ်
တိုင်း တွင် လော် စပီကာ ကြီး ထောင် ထား ကာ ည ၉ နာရီ ရောက်လျှင် တရား ခွေ နှင့် မတ္တာ ပို့များ
ထုတ် လွှင့် တော့ သည်။ တို့မေတ္တာ စွမ်း ကမ္ဘာ လွှမ်း ငြိမ်းချမ်း ကြ ပါ စေ ဆို သည့် အသံ ကြီး
သည် မကြား ချင် မှ အဆုံး ဖြစ်သည်။ အိမ်ထောင်စု တိုင်း ည ရောက် လျှင် ဘုရား ရှိ ခိုး ပြီး အိပ် ရာ
၀င်ရသည်။ အင်တာနက် ကို ကား အသုံး ပြု ခွင့် မရ တော့ ချေ။ Facebook ဆို ဝေလား ဝေး ပင်
ဖြစ်သည်။ ဦးရဲထွဋ် ၊ မှုးဇော် ၊ ခွန်ဒီးယမ် ၊ ဒီမိုဖက်တီး စသည့် Facebook အကျော် အမော် တို့ ကား
Once UponaTime ဖြစ် သွား ပြီ ဖြစ် သည်။မြန်မာ သည် လည်း ကမ္ဘာ ကြီး နှင့် အဆက် ပြတ်သွား ပြီ ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံ တော် သံဃ ဥသျှောင် ကောင်စီ အကြီး အကဲ များ ၏ မော်တော် ကား တန်း ၊ တစ်နည်း အားဖြင့်
လမ်းကြောင်း ကား လာ လျှင် အခြား ကား နှင့် ပြည်သူ တို့က လမ်းဘေး ဆင်း ၍ ရပ် ရသည်။
ရပ် ပေး ရုံ မျှ မက ပျားပျားဝပ်ဝပ် ကာ ဒူးတုပ် ပြီး ခစား ရသည်။ ဤ သို့မလုပ် လျှင် ကားရော လူပါ
ပျောက် ထွက် သွား နိုင်သည်။ ည အချိန် ရောက် ပြီ ဆိုလျှင် ဘုန်းတော်ကြီး နှင့် ၉၆၉ ၊ တောင်သာ
တပ်မတော် တို့က ထရပ် ကား များ ပေါ် တွင် စိန် ပြောင်း ၊ လောင် ချာ ၊ အေကေ များ ကို ကိုယ်
စီ ကိုင် ပြီး ကင်း လှည့် တော့ သည်။ တစ်ချိန် က အနောက် ယဉ်ကျေးမှု နှင့် အသားကျ နေခဲ့သည့်
ရန်ကုန် မြို့ကြီး သည့် သာ့ သနာ့ အလံ ၊ ၉၆၉ အလံ ၊ တောင်သာ တပ်မတော် အလံ များ ဖြင့် တိတ်
ဆိတ် ချောက်ကပ် နေခဲ့သည်။
ရုပ်သံ မီဒီယာ တို့ကို လည်း နိုင်ငံ တော် သံဃ ဥသျှောင် ကောင်စီ က ထိမ်းချုပ် ထား သည်။
မြန်မာ့ ရုပ်မြင် သံကြား သည့် ၂၄ နာရီ ပတ် လုံး ဦးဝီရသူ ၏ နိုင်ငံတော် တိုးတက် ဖွံ့ဖြိုးရေ့း
လုပ်ဆောင် မှု များ နှင့် သာသနာတော် ပြန့် ပွားရေး လုပ် ဆောင် မှု များ ကို လွှင့် သည်။ သူကား
တိုင်း မဂ္ဂဇင်း နှင့် အမေရိကန် မီဒီယာ တို့ကို ကား ပြည်ဝင် ခွင့် ဗီဇာ ထုတ်မပေး တော့ ချေ။
တစ်ချိန် က အင်္ဂလိပ် နာမည် များ နှင့် မြန်မာ မီဒီယာ တို့သည် လည်း ဗုဒ္ဓဘာသာ နှင့် နွယ်
သည့် နာမည် ပြောင်းရသည်။ The Voice ဂျာနယ် က ” အောင်ခြင်း ရှစ် ပါး ဂျာနယ်” ၊ ၀ီကလီး
အီလဗင်း က ” ပရိဒေ၀ ၁၁ မီး ဂျာနယ်” စသည် ဖြင့် အမည် ပြောင်း ရသည်။ The Voice ဂျာနယ်
၏ အကြီး အကဲ ကိုကျော်မင်းဆွေ နှင့် ၀ီကလီ ဂျာနယ် ၏ အကြီး အကဲ ကိုကျော်မင်းဆွေ တို့ 
ကို လည်း အာဏာရ ဘုန်းတော်ကြီးများ က နေ အိမ် အကျယ် ချုပ် ချထား သည် ဆို သည့်
သတင်းများ ထွက် ပေါ်နေသည်။ မည် သူ ပင် ဆို စေ တစ်ချိန် က လစ်ဘရယ် မီဒီယာ အဖြစ်
ဟုတ်သော် ရှိ မဟုတ် သော် ရှိ ကျွေး ကျော် ခဲ့သူ များ မှာ အခုတော့ ပျောက်ခြင်းမလှ ပျောက်
ကုန် ကျ သည်။ အချို့လည်း ထောင်ကျ ၊ အချို့လည်း လက်စ ဖျောက်ခံ ရ ကုန်ကျသည်။
အလွန် တက်ကြွ လွန်း သူ တို့က ဘုန်းတော်ကြီး များ အရပ် သား အစိုးရ ကို အာဏာ ပြန်လွှဲ
ရန် ဆန္ဒ ပြ ကြသည်။ သို့သော် လည်း ထို ဆန္ဒ ပြ မှု များ က ငါးမိနစ် ထက် ပိုမကြာချေ ။
ဘုန်းတော်ကြီးများ နှင့် ၎င်း တို့၏ အထူး တပ် ဖွဲ့များ ထရပ် ကားများ ဖြင့် ရောက်လာပြီး
မြန်မြန် ဆန် ဆန် ပင် ဆွဲ စီတော့ သည်။ တစ်ချိန်က လို ပါဖော့မင့် များ ၊ ဆိုင်းဘုတ် များ ၊
ဖယောင်းတိုင် မီး များ ဖြင့် ဆန္ဒ ပြ ခွင့် မရ တော့ ချေ။ တစ်ချိန် က အမျိုးစောင့် ဥပဒေ နှင့်
၉၆၉ ကို ကန့် ကွက် ခဲ့သည့် ဘုန်းတော်ကြီးများ မှာ လည်း အင်းစိန် ထောင်တွင်းဉ် သတင်း
ညရောက်လျှင်တော့ တို့မေတ္တာ စွမ်း ကမ္ဘာ လွှမ်း ငြိမ်းချမ်း ကြ ပါ စေ ဆို သည့် အသံ ကြီး
ကတော့ ပေါ်လာ မြဲ ဖြစ်သည်။
ဂျပန် နိုင်ငံ နှင့် အနောက် နိုင်ငံ တို့လို စီးပွား ရေး လုပ်ငန်း ကြီးများ လည်း မြန်မာ နိုင်ငံ မှာ
ပြန် သုတ်တော့ သည်။ နိုင်ငံ ၏ ၀င်ငွေ ကျ ကာ ၊ အလုပ်လက်မဲ့ တိုးလာသည်။ ဦးဝီရသူ
က တော့ လစဉ် ဟော ပြောသည့် သံဃာ ဥသျှောင် ၏ ပြည်သူ သို့မိန့် ခွန်း ဉ် မြန်မာ နိုင်ငံ
သည် အခု အချိန် မှာ သမိုင်း တစ်လျှောက် ဘယ်က လ နှင့် မှ မတူ အောင် တိုးတက်
နေသည် ဟု ဆိုသည်။ ဗုဒ္ဓသာသနာ တော် မှာ လည်း အခြား နိုင်ငံ များသို့ပို ပြန့် ပွား
နေသည် ဟု ထည့် သွင်း ဟော ပြောသည်။
နိုင်ငံ ၏ အဓိက စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ မှာ ဦးဝီရသူ ၊ အာဏာရ
နိုင်ငံ တော် သံဃ ဥသျှောင် ကောင်စီ နှင့် နီးစပ် သူများ က လုပ် ခွင့် ရသည်။ ဘုန်း
တော်ကြီးများ အာဏာရ ချိန် တွင် အကပ် ကောင်းသော ခရိုနီ အချို့ က ဆက်ပြီးရှင်
သန် ခွင့် ရသည်။ သို့သော်လည်း သူတို့၏ ကုမ္ပဏီ တိုင်း ဗုဒ္ဓသာသနာ ၊ စီရံ ၊တိဌတု
ဆို သည့် ဆိုင်း ဘုတ်များ ကို ချိတ် ဆွဲ ထား ရသည်။ လမ်းတိုင်း တွင် သံဃ တပ်မတော်
သည် အမျိုးသား ရေး ကို ဘယ်တော့ မှ သစ္စာ မဖောက် ဆို သည့် ပိုစတာ ကြီးများ ကို
တွေ့ ရသည်။ တစ်ချိန် က တောင်သာ တပ်မတော် ကို တည်ထောင်သည် ဟု သတင်း
ထွက် ပေါ် ခဲ့ သည့် ဦးအောင်သောင်း သည် ကန့် လန့် ကာ နောက် ကွယ်မှ နေ ၍ အာဏာ
အရှိ ဆုံး ဆို သည် သတင်း ထွက် ပေါ် နေသည်။ အတိတ် က ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး ဟောင်း သန်းရွှေ လိုပင်
သူ့က တိုင်း ပြည် ၏ အာဏာ အရှိ ဆုံး လူ ဖြစ်နေသည်။
ဘုန်းတော်ကြီးများ အာဏာ ရရှိသည့် နှစ် ကို အစွဲ ပြု ပြီး မှည့် ခေါ် ထားသည့်
တိုင်း ပြည် ၏ အာဏာအရှိ ဆုံး သော ၂၀၂၀ တပ်ရင်း ကို သံဃ ထောက်လှမ်း
ရေး တပ် ကို ပြည်သူများ က ခေါ် ကြသည်။ ၂၀၂၀ က ဖမ်းဆီး သွား သူများ
ကို လူ မြင် ကွင်း တွင် ပြန် တွေ့ ရ ဖို့မလွယ် ကူ တော့ ချေ။
မိန်း ကလေးများ မီနီစကတ် နှင့် ဒူး ပေါ် ၊ ပေါင် ပေါ် များ မ၀တ် ရတော့ ၊ စတိတ် ရှိုး
တော့ သီဆိုခွင့် ပေးထား သည် သို့သော် လည်း ယောင်္ကျင်္ား လေးများ က ပုဆိုး
တိုက်ပုံ ၊ အမျိုးသမီး များ က ချိတ် ထမီ နှင့် ဖြစ်သည်။ သီဆို မည့် သီချင်း သည် လည်း
အမျိုး၊ ဘာသာ၊သာသနာ တော် ကို စောင့်ရှောက်သည့် သီချင်းမျိုး သာ ဖြစ် မှ ဘုန်း
တော် ကြီးများ က ခွင့် ပြုသည်။ နိုင်ငံ ခြား သီချင်း ခွေ များ ၊ ဗီဒီယို ခွေ များ ကို လည်း
ကြည့် ရှု နားထောင် ခွင့် မပြု တော့။
အနောက်တိုင်း ယဉ်ကျေးမှု နှင့် အသားကျ နေ ပြီ ဖြစ်သော ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး ၏ မြေးက
လေး သည် ပင် လျှင် မယ်စကြာဌာ ဟောင်း မိုးစက်ဝိုင် ကို ပင့် ပြီး တရုတ် ပြည် သို့ 
ထွက် ပြေး ရသည်။ သူ ၏ ပြိုင်ကား များ ကို လည်း ဘုန်းတော် ကြီး များ က သိမ်း
လိုက် ပြီ ဖြစ်သည်။ ဦးသန်းရွှေ သတင်း က အစ အန ပင် မကြား ရ တော့ ချေ။
မြန်မာ နိုင်ငံ တွင် အခြေစိုက် လတံ္တ ပြု နေ ပြီ ဖြစ်သည့် ယခင် ပြည်ပ
သတင်း မီဒီယာ တို့က လည်း လာရန် လမ်း တို့ပြန်မြန်း ရသည်။ ဧရာဝတီ သတင်း
ဌာ န သည် ချင်းမိုင် သို့ပြန်ဒိုးရ သလို ၊ ဘီဘီစီ မြန်မာ ပိုင်း သည် လည်း ရန်ကုန်
မှ ဘီဘီစီ သတင်းထောက် ပေး ပို့သည့် ဟု လုပ် ၍ မရ တော့ ချေ။
အင်တာနက် လည်း မရှိ ၊ ရေဒီယို နားထောင် ခြင်း သည် လည်း တရား မ၀င်
တော့ ချေ။ ခောတ်ပညာ တတ် လူငယ် အချို့က ပြည်ပ သို့ ထွက် ပြေးရသည်။
တိုင်းရင်းသား လက်နက် ကိုင်များ က လည်း တောတွင်း သို့ပြန်ရသည်။
ဗုဒ္ဓ ဘာသာ တောတွင်းလက်နက် ကိုင် တို့အတွက် နဲနဲ အသက် ရှု ချောင်
သော် လည်းKIA ကဲ့ သို့ခရစ်ယာန် လက်နက် ကိုင် တို့က ၉၆၉ တပ်
မတော် ၏ ညွှန်ကြား မှု ဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ ကာကွယ်ရေး တပ်မတော် ၊ လက်နက်
တပ် ဆင် လေ့ ကျင့် ပေးထား သည့် ဘုန်းတော်ကြီး တပ်များ ၏ ပြင်းပြင်းထန်
ထန် တိုက် ခိုက်ခြင်း ကို အလူးအလဲ ခံရသည်။ ကားပါမစ် ဆိုသည် မှာ ဘယ်
ရန်ကုန် ၊ မန္တလေး နှင့် နိုင်ငံ တ၀ှမ်းရှိ NGO များ ကလည်း အောင်ဖေ ညောင်းကုန်
တော့ သည်။ ကင်တားနား သည် ဘလက် လစ် ဖြစ် ပြီး ပြည်ဝင် ခွင့် မရတော့
ချေ။ ကုလ ရုံး အချို့ကို တော့ လည် ပတ် ခွင့် ပေးထား သော် လည်း ၊ ဖောလျှော
မျှ သာ ဖြစ်သည်။
ယခင် ရန်ကုန် ရှိ တက်ကြွ သူတို့အချို့က မဲဆောက် သို့ပြန် လစ် ရတော့ သည်။
အနောက် နိုင်ငံ များ က လည်း တစ်ချိန်က လို ရွှေအိုရောင် နှစ်ကာ လ များ မဟုတ်
တော့ သဖြင့် ခါလာ ဖြစ်နေသည်။ အတိုက် အခံ များ ကို ကောင်းကောင်း မထောက်ပံ့
အမေရိကန် အစိုးရ က တော့ လက်ရှိ မြန်မာ နိုင်ငံရေး အခြေ အနေ သည်
စိုးရိမ် စရာ ဟု သတင်း ထုတ် ပြန်သည်။
မျက်မှောက် ကာလ သို့မဟုတ် ပစ္စခတ် အခြေ အနေ များ ကို မူတည် ၍ တို့ ထိ
ထား ခြင်း ဖြစ်သည်။ သက်ရှိ ထင် ရှား လူပုဂ္ဂိုလ်များ ၏ နာမည် ပါဝင် သော် လည်း
FNG က သာစေ ၊ နာစေ လို့သည့် ဆန္ဒ မရှိ ဘဲ ဖတ်ရှု ၍ ကောင်း ရန် အတွက် သာ
ဟဲ ဟဲ ။ ကို ဖြူစိုင်းလူ ရေ ။
အဲလိုဖြစ်မှာကိုတော့ စိတ်မပူပါနှင့် ။
စစ်တပ် အကြောင်း ကောင်းကောင်း သိပါတယ်ဗျ ။
စစ်တပ် က သူတို့ကိုလာထိလို့ကတော့ ၊
ဘုန်းကြီးတွေ တိပိဋက တွေ လာလုပ်မနေနှင့် ၊
အကုန် သင်္ကန်း ဆွဲချွတ်ပြီး ၊ ရဲဘက်စခန်းပို့ ၊
လူစုလူဝေး နှင့် – င် ချလွှတ်ပြီး ၊
ကိုယ်တော်ကို ဘဝ ပြောင်းပေးလိုက်မှာဗျ ။
ဘုန်းကြီး လောက်ကတော့ စစ်တပ် က ပျင်းသနားတယ် ။
မြန်မာပြည်မှာ အတွေးအခေါ် ဥာဏ်ပညာ နုံနဲ့ပြီး ၊
အကျင့်အကြံ အောက်တန်းကျတဲ့ ဘုန်းကြီး ( သင်္ကန်းဝတ် ) တွေ ၊
အားကောင်းလာတဲ့ များပြားလာတဲ့ သက်သေ ပေါ့ ။
ဒီလို အတွေးအခေါ် အကျင့်အကြံ အောက်တန်းကျတဲ့ ၊
ဘုန်းကြီး ( သင်္ကန်းဝတ် ) တွေ များလာတာနှင့် အမျှ ၊
သိပ် မကြာခင်မှာဘဲ လူစိတ် ရှိတဲ့ လူသားချင်း စာနာစိတ်ရှိတဲ့ ၊
နိုင်ငံတကာ အဆင့်မှီ ပညာတတ်တဲ့ အမြင်ကျယ်တဲ့ ၊
ပညာတတ် သူတော်ကောင်း တွေဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာကို စွန့်ခွာကြတော့မှာပါ ။
ဒီခြေလှမ်း.. မကြာခင်ဒီထက်ဆိုးတဲ့ခြေလှမ်းတွေလှမ်းမယ်ဆိုတာ.. သိသင့်တယ်ထင်တာမို့.. လွန်ခဲ့တဲ့ ၅နှစ်ကျော်ကထဲက.. ကျုပ်ကတော့ .. သင်္ကန်းဝတ် သာနုတ္တိုရ်လက်သစ်များ ကို.. တားဂက်ထားပြီးကိုရေးခဲ့တာ..။
မြန်မာပြည်နဲ့..သူ့သမိုင်းအတွက်.. အင်မတန်အရုပ်ဆိုးတဲ့အဖြစ်တွေဖြစ်တဲ့အပြင်.. တိုင်းပြည်ကို ချောက်ထဲကမတက်အောင်လုပ်ကြံနေတဲ့..အယူအတွေးအခေါ်များရဲ့အမြုတေလည်းဖြစ်ပါတယ်..။
လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ယုံကြည်ခွင့်ကိုထိပါးကြရာမှာ.. ဘာသာရေးအယူအဆ..အတွေးအခေါ်.. မတူသူကို.. .. လွတ်လပ်စွာပြိုင်ဆိုင်ပြောဆို.. ချေပခြင်းမပြုပဲ.. ဓမ္မစက်သမားဆိုသူတွေက မြှောက်ပေးလို့.. ..အာဏာစက်နဲ့ပါပူးပေါင်းလို့.. ထောင်ချခဲ့.. ထောင်ချနေဆဲဖြစ်ပြီး.. အဲဒီလို. ဒီမိုကရေစီစနစ်ရဲ့ အဓိကဥပဒေကိုဖေါက်ဖျက်တာကို အခုထိ..၀မ်းသာအားရအားပေးနေသူတွေရှိနေတုံးပါပဲ..။
ထူးဆန်းတာက.. သမ္မတက.. နိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်ကြောင့်အကျဉ်းခံရသူတွေကို တောက်လျှောက်လွှတ်ပေးနေခဲ့ပေမယ့်.. ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်ကြောင့်ထောင်ကျသူတွေကို.. အခုထိဖမ်းချုပ်ထားဆဲပါ..။
အာဏာစက်ရှင်ဖြစ်တဲ့..အစိုးရဟာ.. အလိုတူကြံရာပါလို့..တိုက်ရိုက်ပြောလို့ရတဲ့.. အထောက်အထားကြီးပေါ့..။
မဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းပြည်တွေများ ချမ်းသားလာလိုက်ကြ.. တိုင်းပြည်တည်ငြိမ်အေးချမ်းလိုက်ကြတာများ.. ကျိကျိတက်..။
တလောကတင်.. ယူအက်စ်။။ ပါဆယ်ဒီနားရပ်ကွက်ကို.. တိဘက်ဘုန်းကြီးဒလိုင်လားမား ကြွလာမယ်ဆိုလို့.. ဖူးချင်လို့စောင့်ရင်.. တနှစ်ကျော်ဘွတ်ကင်ရတယ်ဆိုလား.. ယူအက်စ်မှာတင်..အဖြူတွေကြိတ်ကြိတ်တိုးဖြစ်နေကြပုံ…
ဒီဆရာတော်ကြီးသာသနာပြုပုံနဲ့.. ဟောလိဝုဒ်မလဲ.. ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေများလာလှပြီ..။
ဟိုတနေ့ကတောင် မည်းပြောင်နေတဲ့အသားနဲ့ လူမျိုးခြားမှန်းအသိသာ ရုပ်ကြီးနဲ့ သင်ကန်းဝတ်ပြီးလျှောက်သွားနေတာတွေ တွေ့လိုက်သေးတယ်။
ဘယ်လိုမှ ကြည့်ရတာ အဆင်မပြေဘူး.. .
ဆိုတော့ကာ သင်္ကန်းဝတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တောင် အသားအရောင်ပါ ပြောင်းလဲရဦးမယ်လို့ ဆိုလိုတယ်ပေါ့လေ..
လုပ်ချင်ရာလုပ်တဲ့ ပါမစ်ရဖို့ သင်္ကန်းတွေခြုံကြရင် မတွေးရဲစရာ။
အရေခြုံတွေကြောင့် ဘာသာမဲ့ ခံယူတာတော့ မတန်ဖူးထင်ပါရဲ့။
အရေခြုံအားပေးတဲ့ အစွန်းရောက်သမားတွေကတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာ နာမည်ခံပြီး ကျန်ခဲ့မှာပေါ့။
ဘာသာချစ်မျိုးချစ်လို့ အော်ပြီး ဘာသာခြားကို သတ်မယ် ဖြတ်မယ် တကဲကဲလုပ်နေတဲ့
သကောင့်သား သကောင့်သမီးများက တရားတော်တို့ သုတ္တန်တို့ကိုလည်း သူများထက်ဦးအောင် ရှယ်ကြ ဆုံးမကြတယ်ဗျ။
ဘုန်းကြီးကျောင်းကိုလည်း မကြာခဏသွားကြကြောင်းးး ဘယ်လောက် ရိုသေကြောင်း လည်း ကြော်ငြာကြတယ်ဗျ။
အာ့ကို အထင်တကြီးနဲ့ လိုက်ကြ၊ ပြန်ရှယ်ကြ လူတွေလည်း အများကြီးးးးးး
ပြီးမှသာ ဟို မေတ္တာပို့လိုပဲ။
၃၂ ဘုံကျင်လည်ကုန်သော ဟို ဘာသာခြားများမှ လွဲ၍ ကျန်းမာပါစေ ချမ်းသာပါစေ လို့များ ဆုတောင်းကြမလားးးး။
မနေ့ (18/02/2014) ညနေ က မအူကုန်းလမ်းကျယ် တာမွေ ၁၃၃ လမ်း မှာဖြစ်သွားတာလေးပါ။ ပုံပါအတိုင်း ၉၆၉ ဘုန်းကြီး က ကားဘောနက်ပေါ်တက်ပြီး သင်္ဃန်းလှန်ဆဲဆိုနေပုံပါ။ ရှိသမျှ အဆဲပေါင်းစုံနဲ့ မွစ်လင်တွေကိုဆဲနေတာပါ။ ဒါပေမယ့် သူကို ဘယ်သူမှရန်ပြန်မလုပ်ဘဲ ရဲစခန်းလက်အပ်လိုက်တယ်လို့ပြောတယ် ရဲစခန်းက သူ့ကို တောင်းတောင်းပန်ပန်နဲ့ သူလာတည်းနေတဲ့ ကျောင်းကို ပြန်ပို့ပေးလိုက်တယ်တဲ့ ကဲကြည့်။ ရဲ၃ ယောက်က သူကို စကားတောင် ကျယ်ကျယ်မပြောရဲဘူးတဲ့။ ၂၀၀၇ ရွှေဝါရောင်တုန်းက အဲဒီရဲတွေ လူရှေ့သူရှေ့ ကိုယ်တော်တွေကို ပါးရိုက် ခြေထောက်နဲ့ကန်ကျောက်ခဲ့တဲ့ Video တွေအခုထိ ရှိပါသေးတယ်။
အဓိကရုဏ်းဖြစ်ဖို့ လှုံ့ဆော်နေတာတွေ ခပ်စိပ်စိပ်ဖြစ်လာတာကို အားလုံးသတိထားမိမှာပါ။ ဒိုင်နာကားတွေနဲ့ တင်တင်ခေါ်လာတဲ့ အရင်က စွမ်းအားရှင် အခု သင်္ဃန်းဝတ် (သံဃာတော်မဟုတ်ပါ) တွေလည်း အတော်အသင့် ပြင်ဆင်ထားပြီး ready အနေထားမှာရှိနေပါတယ်။ ကျနော်တို့ လည်း မွစ်လင်မုန်းတီးရေး လှည့်ကွက်ထဲ ၀င်သွားပြီး နှာမစေးနေဖို့ပါသတိထားကြပါ။ ဒီသတင်းကို အခုထိ ဘယ်သူဆီမှာမှမတွေ့ရသေးပါ။
ဒီတစ်ခါ ဖြစ်ခွင့်ပေးလိုက်ရင် ကျနော် ၂၀၁၃ အကုန်ပိုင်းလောက်က သတိပေးခဲ့သလို ၂၀၁၄ ဟာ တိုင်းပြည် ချောက်ထဲကျမယ့် နှစ်ဖြစ်ပြီးတော့ ၂၀၁၅ မှာ ချောက်ထဲက နေပြန်ဆွဲတင်ပေးမယ့် တပ် မတော် (မတော်တဲ့ စစ်တပ်) က ကယ်တင်ရှင်အနေနဲ့ အာဏာသိမ်းပြီး ပြည်သူတွေကို ပစ်သတ်ပါဦးမယ် ပြီးရင်တော့ နှစ် ၅၀ ၁၀၀ လောက် တရားဝင် အာဏာသိမ်းစစ်အစိုး အနေနဲ့ မိုက်ရိုင်း အောက်တန်းကျတဲ့ လူတွေကို အုပ်ချုပ်နေရလို့ သေနတ်တပြပြလုပ်နေရပါကြောင်း တလောကလုံးကို ပြပါတော့မယ်။
နိုင်ငံတကာကလည်း ဒီအဖြစ်တွေကို မြင်ခဲ့ပြီးပြီဆိုတော့ အားလုံးလက်ရှောင်ပါတော့မယ်။ ဘုရားပေး ဆုအနေနဲ့ ရှိနေတဲ့ ဒေါ်စုလည်း တဖြည်းဖြည်း အသက်ကြီးပြီး ကျနော်တို့ကို နှုတ်ဆက်သွားပါလိမ့်မယ်။
သတင်းနဲ့ ဓါတ်ပုံ လင်းရောင်ခြည်ကရပါတယ် Share ရင် friend တွေကို tag လုပ်မရလို့ post အနေနဲ့ တင်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။
credit: Stephen Thant
” ၉၆၉ ဘုန်းကြီး က ကားဘောနက်ပေါ်တက်ပြီး
အဲဒီ သတင်း က အမှန်ပါ ။
ဓါတ်ပုံတွေပါ တက်လာပါပြီ ။
ဘုန်းကြီးဝတ်နဲ့တိုင်း သံဃာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ….
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းတက်လာရင် တက်လာတဲ့ သတင်းကိုလည်းပြန်တင်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ် .. နို့မို့ ပထမဆုံးတက်လာတဲ့ သတင်းတွေက မှန်ချင်မှ မှန်တော့ ဒီအတိုင်းထားခဲ့ရင် မသိတဲ့ သူအတွက် သတင်းမှားကြီး ဖတ်နေမိရက်ဖြစ်နေမယ် ..
သင်္ကန်းခြုံထားတဲ့ စိတ်မနှံ့သူ တစ်ဦး ဆိုတဲ့ နောက်ဆက်တွဲကို သိပြီးရင် ပြန်တင်သင့်ပါကြောင်း ..
ဟိုတလောက နိုင်ငံခြားရုပ်သံတစ်ခုက အစီအစဉ်ကို ကြည့်လိုက်တယ်.. ဗီယက်နမ်ဘက်မှာလို့ ထင်တာပဲ.. presenter ၂ ယောက်က ကိုယ်တိုင်သွားကြတာ.. တောင်ပေါ်က ဘုန်းကြီးကျောင်း (မဟာယာန) ကိုသွားတယ်.. ဘုန်းကြီးတွေက နယ်ခံတွေကို အလှူလုပ်ဖို့အတွက် စပါးတွေ စိုက်ကြတယ်.. အဲဒါကိုဝိုင်းကူပေးကြတယ်.. documentary ပုံစံ ရိုက်ထားတယ်.. ဘာရယ်မဟုတ်.. အတော်ကြီး ကွာခြားနေလို့ အံ့သြနေတာ..
စစ်ယူနီဖောင်းမှ ခေါင်းပေါင်း၊ ခေါင်းပေါင်းမှ သင်္ကန် အဟမ်းးးးးးးးးးးးးဆိုတော့ကာ
ရွှေည၀ါဆရာတော်ကြီးရဲ့ မိန့်ကြားချက်လေးကို အလွန်နှစ်သက်မိပါတယ်…
အမျိုးသား အစွန်းရောက် နိုင်ငံရေး စက်ကွင်းထဲ ၀င်မှန်းမသိ ၀င်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ အဲဒီသံဃာတော်တွေကို ဘုန်းကြီးအနေနဲ့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲ ပြောချင်တယ် လူထွက်ပြီး အမတ်လုပ်ကြပါလို့…